Iphepha lokusonga imisebenzi yobugcisa - Malunga Origami
Iphepha lokusonga imisebenzi yobugcisa
Kubantu abaninzi, ukusonga iphepha kunika iiyure zokuphumla kunye nokuzonwabisa, kunye nendawo yokuyila eyamkelekileyo. Ngapha koko, le nto uyithandayo iyonwabisa kangangokuba abantu kwihlabathi liphela bayithathile njengenxalenye yelifa labo lenkcubeko.
Imbali yakuqala yokuSongwa kwePhepha
AmaTshayina ayila inkqubo yokwenza iphepha le-pulp ngaphezulu kweminyaka engama-2 100 eyadlulayo, yiyo loo nto kungamangalisi ukuba ukusongelwa kwephepha kusenokwenzeka ukuba kwavela eTshayina. Ubugcisa bamandulo be-origami, obuhlala bucinga ngomatshini wephepha waseJapan, inokuba ikhule ngokuzimela kumazwe aliqela. Ezinye iingcali zikholelwa ukuba amaTshayina asenokuba aqala ukusonga iphepha ngenkulungwane yokuqala, ngaphambi kweXesha Eliqhelekileyo. Amanye amazwe anembali yokusonga iphepha kubandakanya iJamani neSpain, kunye nemimandla emininzi eAfrika.
izipele simahla ezenzelwe wena kwi-Intanethi
Iphepha le-Origami elisongelayo kwiimbiza
Uyenza njani i-Folded Paper Bowl
Nangona imbali yomlomo waseTshayina nowaseJapan ibonisa ukuba uhlobo lobugcisa kusenokwenzeka ukuba lwaluthandwa kangangeenkulungwane, irekhodi lakudala elaziwayo lokusongwa kwephepha lisusela ngo-1490. Icandelo lehlabathi , uxwebhu olwenziwe ngumfundi waseIreland uJohannes de Sacrobosco.
Ngomnyaka we-1680, imbongi yaseJapan uIhara Saikaku wachaza iphupha elinamabhabhathane e-origami. Ngokunokwenzeka, oku kubonisa ukuba i-origami yayisele iyinxalenye ebaluleke kakhulu kwinkcubeko yaseJapan.
Iphepha lale mihla lokuSonga imisebenzi
Kuba ukusongelwa kwamaphepha kuphuhliswe kwiindawo ezininzi zehlabathi, kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo zokwenza izinto ezinemilinganiselo emithathu ephepheni. Funda malunga ezimbalwa kubo, kwaye uzame ukuba ubone ukuba yeyiphi oyithandayo. Unokumangaliswa!
Imisebenzi yaseJamani yePhepha eliSongelweyo
EJamani, ukusonga iphepha yinxalenye ebalulekileyo yenkcubeko yesizwe. Ngapha koko, abafundi besikolo baseJamani benkulungwane ye-19 bafunda ukusonga iphepha njengenxalenye yezifundo zabo zesikolo. Ngelo xesha, amaJamani ayekholelwa ukuba ukusonga iphepha kunika abantwana indlela yokwenza yokufunda imathematics.
Enye yeeprojekthi zobugcisa ezithandwayo zaseJamani ziyinkwenkwezi-ntathu. Obu bugcisa benziwa ngokusonga amaphepha ukwenza inkwenkwezi entle enemibala emininzi, nesetyenziswa ngokwesiko njengomhombiso weKrisimesi. Ezi zixhobo ziya kukunceda ufunde ukwenza inkwenkwezi yephepha laseJamani:
uyenza njani iphepha lemoto
Inkwenkwezi yeKrisimesi yaseJamani yePhepha eliSongiweyo
Uyenza njani iNkwenkwezi yaseJamani
I-3-D Iinkwenkwezi ezivela kwii-Highhopes
Imiyalelo yeFroebel Star
IsiTshayina esongiweyo sePhepha
Ubugcisa baseTshayina bokugoqa iphepha, obubizwa ngokuba yi 'zhe zhi,' inokuba yeyona nto indala yokusonga emhlabeni. Kutshanje, ukusongelwa kweGolden Venture, ethiywe ngegama leqela lababanjiweyo baseTshayina abagqwesileyo ubugcisa, sele ithandwa kakhulu ngabazobi kunye nabathandi be-origami. Olu hlobo lokusongelwa kwephepha lisebenzisa iiyunithi zemodyuli ukwenza ubume obuphindwe kathathu, njengeepinapile, iipikoko kunye ne-swans. Ezi zinto ziyilayo zinokusebenzisa naphina ukusuka kuma-200 ukuya kumawaka amawaka amaqhekeza ngamanye.
Ezi webhusayithi zibonelela ngemiyalelo yobugcisa bamaphepha abasebenzisa ubuchule bokusonga iGolide Venture:
Ngaba abafazi abakhulelweyo banokuthatha i-tylenol pm
Imiyalelo yeCandelo leZibonelelo zeOrigami
Imiyalelo yeZiko leMithombo ye-Origami yeGolide yeVenture Swan
Isandla seVenture yegolide esivela kwii-Instructables
Imisebenzi yaseJapan yePhepha eliSongelweyo
Mhlawumbi eyona idumileyo kuyo yonke inkcubeko yokusonga iphepha, amaJapan abudibanise obu bugcisa kwiindawo ezininzi zobomi babo. Kukho iintlobo ezininzi zokusonga iphepha laseJapan, kubandakanya i-origami yesiko, i-Kirigami, kunye ne-modular origami. Iprojekthi yobugcisa yokugoba yaseJapan inokubalela ngokulula ukuya kobunzima kakhulu, kodwa ngokuqinisekileyo kuya kubakho iprojekthi ehambelana nenqanaba lakho lesakhono:
Imiyalelo yasimahla ye-Origami yaseJapan
Intaka elula yeOrigami
I-Origami Swans yaBasaqalayo
Imisebenzi yasePoland eyenziweyo
AmaDatshi analo nohlobo lokusongwa kwephepha lemveli, elibizwa ngokuba yi-'iris folding. ' Olu hlobo lobugcisa bokugoba alunakubhenela kwabanye abathanda i-origami, kuba isebenzisa itape kunye namaqhekeza ephepha. Nangona kunjalo, uya kumangaliswa zizinto ezininzi ezintle onokuzenza ngokusonga i-iris:
Funda iIris yokuSonga
Iris Folded Square ukusuka eGomakesomething.com
Kungekudala emva kokuveliswa kwephepha elise-pulp, iinkcubeko ezininzi zaqala ukuphuhlisa iphepha lokusonga iphepha. Uninzi lwale misebenzi yobugcisa lukhona namhlanje, kwaye kunokuba kumnandi ukuzama ukusonga iphepha usebenzisa ezi ndlela zimbi.
Kunye Size Women's Lingerie I-Origami Izilwanyana Ifoto Contests And Careers Inja Uhlangulo Noku Ukwamkelwa Malunga Iikatala
imele ntoni i-yang ne-yang
ukhathalela njani oomama ekwindla
Ngaba iilibra kunye neepisces ziyavana
fumana umntu simahla ngegama
Imihla yokuzalwa inqwenela umkhwenyana